ငါး မရရငျ ဘဲတကောငျပေးမယျဆိုတဲ့ ငါးကနျပိုငျရှငျရဲ့ လှညျ့ကှကျအမှနျ - Shwe Khit
ငါး မရရငျ ဘဲတကောငျပေးမယျဆိုတဲ့ ငါးကနျပိုငျရှငျရဲ့ လှညျ့ကှကျအမှနျ
-တဈခါကပေါ့.မွို့နဲ့မနီးမဝေးမှာ ငါးကနျလေးတဈခုဖှငျ့ပါတယျ l”အခကွေးငှေ”ယူပွီး ငါးမြှားအပနျးဖွတေဲ့နရောပေါ့။ဖှငျ့ပှဲနမှေ့ာ အထူးအစီအစဉျအနနေဲ့ ငါးမြှားလို့ ငါးမရတဲ့သူတှကေို ဘဲတဈကောငျလကျဆောငျပေးမှာဖွဈပါတယျ။
-အဲဒါနဲ့ ဖှငျ့ပှဲနမှေ့ာပဲ ပြျောပြျောပါးပါးလာရောကျငါးမြှားကွပါတယျငါးမရလညျး ဘဲယူပွနျပေါ့၊ ဒီလိုနဲ့ ငါးကနျပိုငျရှငျရဲ့ ဘဲတှလေညျးအကုနျပွောငျပဲ..။ မြှားတဲ့သူတှကေ ငါးရဖို့ထကျ ဘဲတဈကောငျရဖို့ကိုပိုစိတျဝငျစားကွလို့လား။-နောကျမှသိလိုကျရတယျ. တဈကယျတော့ ငါးကနျပိုငျရှငျသူဌေးဟာ အရငျက ဘဲမှေးမွူရေးလုပျတာပါ အဲဒီနောကျ ငါးမှေးမွူရေးကိုပွောငျးလုပျခငျြပမေယျ့ ငါးမြိုးဝယျထညျ့ဖို့က အရငျးအနှီုးမရှိ ဘဲတှကေလညျးရောငျးမထှကျတော့ ဒီနညျးကိုသုံးလိုကျတာ တဈခကျြခုတျပွီး သုံးခကျြပွတျသှားပါတယျ.။ သူ့ ဘဲတှလေညျးကုနျ ပိုကျဆံလညျးရ ငါးမြှားတဲ့သူလညျးကနြေပျပေါ့ ဒီလိုနဲ့ ငါးမှေးမွူရေးကိုအောငျမွငျစှာစတငျနိုငျခဲ့တယျ..။
-နောကျတဈလလောကျကွာတော့ နောကျထပျပရိုမိုးရှငျးထပျလုပျပါတယျ မညျသူမဆို အခမဲ့ငါးမြှားနိုငျပါသညျငါးမိရငျတော့ တဈကီလိုကို ၅ ဒျေါလာပေးရမညျ။ တဈသုတျပွီးတဈသုတျလာလိုကျတဲ့ ငါးမြှားဝါသနာရှငျတှေ ထူးဆနျးတာက မြှားတဲ့သူတိုငျး ငါးမိကွတာပါပဲ။
– တဈကယျတော့ ငါးကနျသူဌေးက ငါးတှကေိုပိုလြှံအောငျ အမြားကွီးထညျ့ထားပွီး Demand ထကျ supply ကိုပိုမြားအောငျလုပျထားတော့ ငါးမိနိုငျခွလေညျးပိုမြားတာပေါ့။ နောကျပွီး ငါးမြှားဝါသနာရှငျတိုငျးက ငါးမိရငျပြျောတဲ့သူကွီးပဲလေ..အဲဒီတော့ ဈေးမှာ တဈကီလိုကို ၃ ဒျေါလာပဲပေးရပမေယျ့ ကိုယျတိုငျမိတဲ့ငါးကို ဈေးပိုပေးပွီးကနြေပျစှာဝယျယူကွပါတယျ။
-နောကျရကျအနညျးငယျခနျ့ကွတော့..ငါးတှလေညျး အရအေတှကျလြော့လာပွီ. ငါးမြှားတဲ့သူတှလေညျး နညျးလာပွီးဆိုတော့ နောကျတဈမြိုးပွောငျးလိုကျပါသညျ။မြှားလို့ရတဲ့ငါးကို အခမဲ့ယူနိုငျတယျ ငါးမြှားခြိနျကို တဈနာရီ ၁၀ ဒျေါလာဆိုပွီးသတျမှတျလိုကျတယျ၊ လစဉျကွေးအနနေဲ့ မနျဘာဝယျမယျဆိုရငျတော့ တဈလကို ဒျေါလာ၅၀၀ ပေါ့။ ဝနျ ဆောငျ မှုအနနေဲ့ happy hour မှာ ဘီယာ ၂ ပုလငျး နဲ့ အာလူးကွျောတဈပှဲအခမဲ့ပေးမယျ၊ နောကျအခွားသော ပြျောရှငျဖှယျအစီအစဉျလေးတှလေညျးစီစဉျထားပါတယျ တံငါသညျဝတျစုံဝတျပွီး ရသေူမပုံဝတျဆငျထားသော မျောဒယျဂဲလျလေးတှနေဲ့ ဓါတျပုံရှိကျတာတို့. ဖမျးမိတဲ့ငါးတှကေို ကိုယျတိုယျကငျစားတာတို့.ဘာတို့ပေါ့အဲဒီဝနျဆောငျမှုတှအေတှကျကတော့ သီးခွားအခကွေးငှပေေးရပါတယျ.။ ဒီလိုနဲ့ငါးကနျလေးဟာ ပွနျလညျစညျကားသိုကျမွိုကျလာခဲ့သညျ။
-နှဈဝကျအတှငျးမှာ ငါးကနျပိုငျရှငျဟာ အမွတျငှတှေအေမြားကွီးရပွီး နောကျထပျအစီအစဉျတဈခုကိုအကောငျအထညျဖျေါပါတယျ.။ သူငါးကနျမှာလာပွီး အပနျးဖွတေဲ့သူတှအေားလုံးက လုပျငနျးရှငျဘောစိတှကွေီးပဲဆိုတော့ network တဈခုကိုရထားပွီးပွီလေ၊ အဲဒီတော့ ရှလေု့ပျမယျ့လုပျငနျးအတှကျ ရှယျယာချေါလိုကျပါတယျ။ အငျးကွီးတဈခုလုံးကို နှဈရှညျဌားမယျ.ပွီးရငျ ဘနျဂလိုလေးတှဆေောကျမယျ ဟိုတယျပုံစံလေးလုပျပွီး နှရောသီအပနျးဖွစေခနျးတဈခုဖနျတီးမယျ။ အပနျးဖွဖေို့
အတှကျ entertainment မြိုးစုံကိုစီစဉျမယျ ဆိုပွီး သူ့ရဲ့ပလနျကိုခပြွပွီးရှယျယာချေါလိုကျပါတယျ။ နဂိုလုပျငနျးရဲ့အောငျမွငျတဲ့အရှိနျအဝါနဲ့ လုပျငနျးရှငျတှရေဲ့ယုံကွညျမှုကိုရထားပွီးသားဆိုတော့ ခဏတှငျးခငျြးပဲ ရှယျယာအကုနျရောငျးထှကျသှားပါတယျ။
-နောကျတဈနှဈလောကျနတေော့ သူရဲ့အပနျးဖွရေပေျေါဟိုတယျစီမံကိနျးကွီး အောငျမွငျစှာအကောငျအထညျဖျေါခဲ့ပါသညျ။ သတငျးမီဒီယာတှကေ သူ့ရဲ့အောငျမွငျမှုနညျးလမျးကို အငျတာဗြူးတော့ ငါးကနျပိုငျရှငျလေးက ဒီလိုဖွသှေားပါတယျ စီးပှါးရေးလုပျပွီဆိုရငျ လူတှရေဲ့အကွောငျးကိုနားလညျရမယျလူတှရေဲ့လိုအပျခကျြကိုသိရမယျလူတှကေိုပြျောအောငျလုပျပေးနိုငျရငျ ပိုကျဆံရှာရတာလှယျသှားပါမယျ.. တဈနညျးအားဖွငျ့ human behaviour ကိုနားလညျအောငျလုပျပါmanagement လညျးအဲဒါပဲ
credit to-no pain no gain
ငါး မရရင် ဘဲတကောင်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ ငါးကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့ လှည့်ကွက်အမှန်
-တစ်ခါကပေါ့.မြို့နဲ့မနီးမဝေးမှာ ငါးကန်လေးတစ်ခုဖွင့်ပါတယ် l”အခကြေးငွေ”ယူပြီး ငါးမျှားအပန်းဖြေတဲ့နေရာပေါ့။
ဖွင့်ပွဲနေ့မှာ အထူးအစီအစဉ်အနေနဲ့ ငါးမျှားလို့ ငါးမရတဲ့သူတွေကို ဘဲတစ်ကောင်လက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။
-အဲဒါနဲ့ ဖွင့်ပွဲနေ့မှာပဲ ပျော်ပျော်ပါးပါးလာရောက်ငါးမျှားကြပါတယ်ငါးမရလည်း ဘဲယူပြန်ပေါ့၊ ဒီလိုနဲ့ ငါးကန်ပိုင်ရှင်ရဲ့ ဘဲတွေလည်းအကုန်ပြောင်ပဲ..။ မျှားတဲ့သူတွေက ငါးရဖို့ထက် ဘဲတစ်ကောင်ရဖို့ကိုပိုစိတ်ဝင်စားကြလို့လား။-နောက်မှသိလိုက်ရတယ်. တစ်ကယ်တော့ ငါးကန်ပိုင်ရှင်သူဌေးဟာ အရင်က ဘဲမွေးမြူရေးလုပ်တာပါ အဲဒီနောက် ငါးမွေးမြူရေးကိုပြောင်းလုပ်ချင်ပေမယ့် ငါးမျိုးဝယ်ထည့်ဖို့က အရင်းအနှီုးမရှိ ဘဲတွေကလည်းရောင်းမထွက်တော့ ဒီနည်းကိုသုံးလိုက်တာ တစ်ချက်ခုတ်ပြီး သုံးချက်ပြတ်သွားပါတယ်.။ သူ့ ဘဲတွေလည်းကုန် ပိုက်ဆံလည်းရ ငါးမျှားတဲ့သူလည်းကျေနပ်ပေါ့ ဒီလိုနဲ့ ငါးမွေးမြူရေးကိုအောင်မြင်စွာစတင်နိုင်ခဲ့တယ်..။
-နောက်တစ်လလောက်ကြာတော့ နောက်ထပ်ပရိုမိုးရှင်းထပ်လုပ်ပါတယ် မည်သူမဆို အခမဲ့ငါးမျှားနိုင်ပါသည်ငါးမိရင်တော့ တစ်ကီလိုကို ၅ ဒေါ်လာပေးရမည်။ တစ်သုတ်ပြီးတစ်သုတ်လာလိုက်တဲ့ ငါးမျှားဝါသနာရှင်တွေ ထူးဆန်းတာက မျှားတဲ့သူတိုင်း ငါးမိကြတာပါပဲ။
– တစ်ကယ်တော့ ငါးကန်သူဌေးက ငါးတွေကိုပိုလျှံအောင် အများကြီးထည့်ထားပြီး Demand ထက် supply ကိုပိုများအောင်လုပ်ထားတော့ ငါးမိနိုင်ခြေလည်းပိုများတာပေါ့။ နောက်ပြီး ငါးမျှားဝါသနာရှင်တိုင်းက ငါးမိရင်ပျော်တဲ့သူကြီးပဲလေ..အဲဒီတော့ ဈေးမှာ တစ်ကီလိုကို ၃ ဒေါ်လာပဲပေးရပေမယ့် ကိုယ်တိုင်မိတဲ့ငါးကို ဈေးပိုပေးပြီးကျေနပ်စွာဝယ်ယူကြပါတယ်။
-နောက်ရက်အနည်းငယ်ခန့်ကြတော့..ငါးတွေလည်း အရေအတွက်လျော့လာပြီ. ငါးမျှားတဲ့သူတွေလည်း နည်းလာပြီးဆိုတော့ နောက်တစ်မျိုးပြောင်းလိုက်ပါသည်။မျှားလို့ရတဲ့ငါးကို အခမဲ့ယူနိုင်တယ် ငါးမျှားချိန်ကို တစ်နာရီ ၁၀ ဒေါ်လာဆိုပြီးသတ်မှတ်လိုက်တယ်၊ လစဉ်ကြေးအနေနဲ့ မန်ဘာဝယ်မယ်ဆိုရင်တော့ တစ်လကို ဒေါ်လာ၅၀၀ ပေါ့။ ဝန် ဆောင် မှုအနနေဲ့ happy hour မှာ ဘီယာ ၂ ပုလင်း နဲ့ အာလူးကြော်တစ်ပွဲအခမဲ့ပေးမယ်၊ နောက်အခြားသော ပျော်ရွှင်ဖွယ်အစီအစဉ်လေးတွေလည်းစီစဉ်ထားပါတယ် တံငါသည်ဝတ်စုံဝတ်ပြီး ရေသူမပုံဝတ်ဆင်ထားသော မော်ဒယ်ဂဲလ်လေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံရှိက်တာတို့. ဖမ်းမိတဲ့ငါးတွေကို ကိုယ်တိုယ်ကင်စားတာတို့.ဘာတို့ပေါ့အဲဒီဝန်ဆောင်မှုတွေအတွက်ကတော့ သီးခြားအခကြေးငွေပေးရပါတယ်.။ ဒီလိုနဲ့ငါးကန်လေးဟာ ပြန်လည်စည်ကားသိုက်မြိုက်လာခဲ့သည်။
-နှစ်ဝက်အတွင်းမှာ ငါးကန်ပိုင်ရှင်ဟာ အမြတ်ငွေတွေအများကြီးရပြီး နောက်ထပ်အစီအစဉ်တစ်ခုကိုအကောင်အထည်ဖေါ်ပါတယ်.။ သူငါးကန်မှာလာပြီး အပန်းဖြေတဲ့သူတွေအားလုံးက လုပ်ငန်းရှင်ဘောစိတွေကြီးပဲဆိုတော့ network တစ်ခုကိုရထားပြီးပြီလေ၊ အဲဒီတော့ ရှေ့လုပ်မယ့်လုပ်ငန်းအတွက် ရှယ်ယာခေါ်လိုက်ပါတယ်။ အင်းကြီးတစ်ခုလုံးကို နှစ်ရှည်ဌားမယ်.ပြီးရင် ဘန်ဂလိုလေးတွေဆောက်မယ် ဟိုတယ်ပုံစံလေးလုပ်ပြီး နွေရာသီအပန်းဖြေစခန်းတစ်ခုဖန်တီးမယ်။ အပန်းဖြေဖို့
အတွက် entertainment မျိုးစုံကိုစီစဉ်မယ် ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ပလန်ကိုချပြပြီးရှယ်ယာခေါ်လိုက်ပါတယ်။ နဂိုလုပ်ငန်းရဲ့အောင်မြင်တဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေရဲ့ယုံကြည်မှုကိုရထားပြီးသားဆိုတော့ ခဏတွင်းချင်းပဲ ရှယ်ယာအကုန်ရောင်းထွက်သွားပါတယ်။
-နောက်တစ်နှစ်လောက်နေတော့ သူရဲ့အပန်းဖြေရေပေါ်ဟိုတယ်စီမံကိန်းကြီး အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖေါ်ခဲ့ပါသည်။ သတင်းမီဒီယာတွေက သူ့ရဲ့အောင်မြင်မှုနည်းလမ်းကို အင်တာဗျူးတော့ ငါးကန်ပိုင်ရှင်လေးက ဒီလိုဖြေသွားပါတယ် စီးပွါးရေးလုပ်ပြီဆိုရင် လူတွေရဲ့အကြောင်းကိုနားလည်ရမယ်လူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုသိရမယ်လူတွေကိုပျော်အောင်လုပ်ပေးနိုင်ရင် ပိုက်ဆံရှာရတာလွယ်သွားပါမယ်.. တစ်နည်းအားဖြင့် human behaviour ကိုနားလည်အောင်လုပ်ပါmanagement လည်းအဲဒါပဲ
ပရိတျသတျ အခဈြတျော လူရှငျတျောကွီး ဦးမိုးဒီ ကိုဗဈကူးစကျ ခံရ ( Breaking News)